အဓိကသရုပျဆောငျထားသူတှကေ အကျရှငျမငျးသား Jason Statham, Jennifer Lopez, Micheal Chiklis နဲ့ Nick Nolte တို့ဖွဈကွပါတယျ….ဒီဇာတျကားမှာ ခေါငျးဆောငျမငျးသားStathamဟာ သူ့စတနျ့အားလုံးကို လူစားမထိုးဘဲ ကိုယျတိုငျသရုပျဆောငျကွောငျး သိရပါတယျ….
Stathamဟာ Parker ဇာတျရုပျနဲ့ အံကိုကျဖွဈကွောငျး၊ J.Loရဲ့ဇာတျကောငျ Leslie က တော့ ပရိသတျကို ရယျမောစကွေောငျး တခြို့က ပွောပါတယျ…Donald Westlake ရဲ့ ပရိသတျတဈဦးဖွဈတဲ့ စာရေးသူအနနေဲ့တော့ Statham ရဲ့ပရိသတျတှေ ကနြေပျမှုရစမေယျ့ ဖွဖြေျောရေးအသားပေး လြှို့ဝှကျသညျးဖိုအကျရှငျဇာတျကားတဈကားလို့ပဲ မှတျခကျြခခြငျြပါတယျ….
အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားသူတွေက အက်ရှင်မင်းသား Jason Statham, Jennifer Lopez, Micheal Chiklis နဲ့ Nick Nolte တို့ဖြစ်ကြပါတယ်….ဒီဇာတ်ကားမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားStathamဟာ သူ့စတန့်အားလုံးကို လူစားမထိုးဘဲ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ကြောင်း သိရပါတယ်….
Stathamဟာ Parker ဇာတ်ရုပ်နဲ့ အံကိုက်ဖြစ်ကြောင်း၊ J.Loရဲ့ဇာတ်ကောင် Leslie က တော့ ပရိသတ်ကို ရယ်မောစေကြောင်း တချို့က ပြောပါတယ်…Donald Westlake ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စာရေးသူအနေနဲ့တော့ Statham ရဲ့ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်မှုရစေမယ့် ဖြေဖျော်ရေးအသားပေး လျှို့ဝှက်သည်းဖိုအက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားလို့ပဲ မှတ်ချက်ချချင်ပါတယ်….